Izifo Zokudla Kwenkomo Zobisi
Izifo zokudla azithathelisi futhi ngokuvamile ziwumphumela wokulawulwa okungondleki kokudla. Kungenzeka ukuthi kwenzeke phakathi nesikhathi sokukholisa, kodwa izifo eziningi zokuvimbela umzimba zingavinjelwa ukuphathwa okunempilo.
Izimpawu zoMfiva wobisi Ezinkomeni Zobisi
Umkhuhlane wemilenze uvame ukutholakala ezinsukwini ezintathu noma ezine emva kokuthola ezinkomeni ezindala ezikhiqizayo. Kubuye kuvame kakhulu kuJersey kunezinye izinhlobo. Umkhuhlane wamanzi ubangelwa ukwehla okungazelelwe kwezinga legazi le-calcium (Ca) ngenxa yokukhiqizwa ubisi.
Phakathi nenkathi eyomile izinkoma zobisi zinezidingo ezincane ze-calcium. Lapho i-calving futhi maduzane, izidingo ze-calcium yenkomo zikhula ngokushesha ngenxa yokukhiqizwa ubisi. Uma ukudla kokudla kwe-calcium nakho kuphansi, kukhishwa i-calcium emasendeni. Uma le nqubo ihamba kancane, i-hypocalcemia (ubisi lwe-milk fever) iqala. Kubizwa nangokuthi i-downer ye-cow syndrome njengoba izinkomo zithola ukuhluleka kwemisipha, okubangela ukuba balale phansi.
Kunezigaba ezintathu ezihlukile zemfiva yobisi:
Okokuqala, izinkomo ezithintekile zibonisa izimpawu zokucindezeleka, ukwesaba, izindlebe zokuqothula nokulala phansi.
Okwesibili, izinkomo zilele phansi endaweni yangaphandle, nekhanda layo lingena emgodini walo.
Okwesithathu, izinkomo zilele phansi futhi zingabonakali nokho ukuphendula, zingabi nandaba, okuholela ekufeni.
Ukwelashwa kokuqala kuhilela umjovo we-intravenous Ca. Izinyathelo ezivimbelayo zihloselwe ukondla izinkomo.
Ukuqumba Ezinkomeni Zobisi
Ukuqumba kubangelwa ukuqoqwa kwegesi ngokweqile ku-rumen yezinkomo. Ngokujwayelekile, leli gesi livinjelwe. Ngokuvamile i-Bloat ivela lapho izinkomo zidla amadlelo, njenge-clover ne-lucer in spring. Izinkomo ezilambile ezizidla emadlelweni amancane nazo ziyingozi. Ekuseni ngamazolo otshanini noma emanzini, izinsuku ezinomoya nazo zihlobene nokuqubuka.
Ukuqumba\_ ingavinjelwa ngokudla u-hay noma isiliva ngaphambi kokuba izinkomo ziphume emadlelweni. Ngaphandle kwalokho, izinkomo kufanele zifinyelele emadlelweni okwesikhashana, zisho amahora amabili kuphela. Izinkomo zokugcoba emva kokugubha nge-detergent emlonyeni zisetshenziselwa kabanzi ezindaweni zokudla ezisemadlelweni eNew-Zealand. Ngaphandle kwalokho, i-roughage engaphezulu ingafakwa ekudleni.
Uma izinkabi sezikhukhumezekile futhi zicindezeleke kakhulu, igesi kufanele ikhishwe ngokusebenzisa i-trocar (inaliti ekhethekile emithathu) noma inaliti enkulu yomkhuhlane we-milk fever. Isayithi sokugwaza kusehlangothini lwesobunxele, ububanzi besandla esivulekile ngemuva kombundu wokugcina kanye nebanga elifanayo ngezansi kokuphela kwezimbambo ezincane. Udokotela wezilwane kufanele avalile ukusika futhi ahlinzekwe ukwelashwa kwama-antibiotic ukuvimbela izinkinga ezengeziwe.
I-Acidosis ibangelwa izinkomo ezidla ukudla okungezansi kwe-fiber (esebenzayo) futhi ziphezulu kuma-carbohydrate enokuvutha okusheshayo afana nommbila, ukolweni noma ibhali.
Izinga le-asidi le-rumen fluid liyashintsha phakathi nesikhathi samahora angu-24. I-Acidosis ivela lapho amazinga e-acidity ephakeme, ngamazinga we-pH angaphansi kwe-5.5. Lokhu kwenzeka lapho ukudla kunamazinga aphezulu e-carbohydrate enokuvutha kalula (ekugxileni) nokuntuleka kwe-fibre esebenza ngokomzimba, i-roughage. Ngenxa yalokhu, ukuvuthwa (ukuhlaziya) kuncishisiwe, okuzoholela ekunciphiseni amandla okuvuthwa kwemvelo ye-rumen. Ngesikhathi sokuvuthwa ukuqubuzana kwemvelo kwenzeka emanzini okugwinya.
Ukuze uvimbele i-acidosis, unciphisa ukungena kokugxila futhi ufake izinhlayiya ezide kakhulu ekudleni. I-fiber ende ekudleni ikhuthaza ukuthuka emva kokudla. Kubandakanya i-buffer yokudla efana ne-sodium bicarbonate (i-baking soda) ekudleni uma kuningi okugxilwe ekuphepheni, kunganciphisa izinga lama-rumen acidity.